Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Dhuumo Shidaalka Qaada Dekadaha Eritrea Kasoo Xidhiidhinaysa.
Itoobiya oo Dhuumo Shidaalka Qaada Dekadaha Eritrea Kasoo Xidhiidhinaysa.
Posted by ONA Admin	/ August 10, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Itoobiya ayaa sheegaya in dowlada imaraadku maalgalinayso dhismaha dhuumo shidaalka qaada oo dhulka hoostiisa mara iskuna xidha dekada ASSAB ee dalka Eritrea iyo caasimada Gumaysiga Itoobiya ee Addis Ababa.
Heshiiskan dhuumaha shidaalka qaada lagu dhisayo oo ay maanta kala sixiixdeen dowlada Isku Taga Imaraadka Carabta (UAE) iyo Itoobiya ayaa waxaa qalinka ku duugay Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Wasiirada Iskaashiga Caalamiga ah ee UAE Reem Al Hashimy.
Gumaysiga Itoobiya oo la dalaadhacaya culays dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayaa bishii tagtay ee Julay waxa uu Boqortooyada Sacuudiga ka codsaday in uu hal sano shidaal dayn ah siiyo. Lama oga in Sacuudiga dalabka Itoobiya aqbalay iyo inkale.